I-Apple Music TV yanda yaya e-UK nase Canada | Ndisuka mac
I-Apple Music TV iya e-UK nase-Canada
Ngo-Okthobha ophelileyo, iApple yasungulwa I-Apple Music TV ngokukodwa eUnited States, inkonzo leyoYabelana ngeevidiyo zomculo iiyure ezingama-24 ngosuku, ngesitayile esifana kakhulu nesinokusifumana kwimvelaphi ye-MTV kwaye ngakumbi ngoku kwi-VH-1, Sol Music (eSpain) ...
Kwiinyanga ezi-6 emva kokuphehlelelwa eMelika, iApple ikwandisile ukubakho kwale nkonzo kumazwe amabini amatsha: I-United Kingdom kunye neCanada. Ukubheja kuka-Apple ngale nkonzo kukufikelela kubathandi bomculo kunye nabo bonwabela iividiyo zomculo, ngaphandle kolunye uhlobo lweentengiso.
Okwangoku, asizazi izicwangciso zokwandisa le nkonzo ukuya kwamanye amazwe, kodwa iya kuba ngumcimbi wokuhlala phantsi ulinde. Eli qonga, elithi Ikhululekile kwaye ayifuni ukubhaliswa kwi-Apple Music, iyafumaneka zombini kwi-Apple TV ngokusebenzisa iApple Music usetyenziso, nangayo nayiphi na isixhobo se-iOS kunye neMacOS.
Ukuba ukwelinye lala mazwe mathathu apho iApple Music sele ikho, unokufikelela kuyo ngokunqakraza kwi Bhrawuza itab yeApple Music app. Ikwafumaneka ngoku unxibelelwanookoko ifumaneka kwilizwe lakho, ngapha koko iya kukuthumela kwiwebhusayithi ye-Apple TV +.
Ukongeza kwiividiyo zomculo, eli qonga likwenzelwe ukusasaza imicimbi ekhethekileyo kunye nemiboniso bhanyabhanya, nangona okwangoku ngenxa yobhubhane, Olu hlobo lomxholo alukafumaneki nangaliphi na ixesha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Music TV iya e-UK nase-Canada
Ngaba ngumbono olungileyo ukuthenga iMacBook Pro ngoku?